Tsy mbola voafehy… : renim-pianakaviana roa indray no matin’ny pesta | NewsMada
Tsy mbola voafehy… : renim-pianakaviana roa indray no matin’ny pesta
Tsy araka ny voalazan’ny minisitry ny Fahasalamana, tamin’ny herinandro ambony, fa mbola tsy voafehy ny aretina pesta. Vehivavy roa, 30 sy 25 taona indray mantsy no namoy ainy, tao amin’ny hopitalibe Toamasina, ny faran’ny herinandro teo.
Renim-pianakaviana roa 30 sy 25 taona indray no namoy ny ainy tao amin’ny hopitalibe Toamasina, sampana PPH ( Pneumologie et phitosiologie), ny asabotsy teo. Raha ny angom-baovao rehetra natao, mitovy tsy misy valaka tamin’ny fisehoan’ny tranga voalohany ny fisehoan’ ity farany.
Mpandeha avy any Ambatondrazaka ireto olona roa ireto ary narary voalohany ny zokiolona nikarakara ny iray. Narary ihany koa ity mpikarakara ary samy nalefa tao amin’ny hopitaly manara-penitra etsy Morafeno avokoa ny zoma teo.
Tsy afaka nihazona azy ireo ny hopitaly etsy Morafeno ka nandefa indray tany amin’ny hopitaly be Analankinina. Nandefa azy roa vavy tao amin’ny sampana PPH, izay misahana ny aretina amin’ny tratra sy avokavoka ary areti-mifindra sy mora miparitaka ity ny dokotera tao an-toerana.
Nohamafisin’ny loharanom-baovao fa pestan’ny havokavoka (peste pulmonaire) ny nahazo azy roa ireto.
Nahitana tranga nampiahiahy ihany koa teny Atsimondrano, kaominina Ankaraobato, Ankadilalampotsy. Nivory haingana ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka omaly ka nambaran’ny tale iray tao an-toerana fa efa voaporofo fa tsy pesta no nahazo ilay narary.
Marihina fa ny mamono afo hatrany no ataon’ny minisitera. Vao tamin’ny herinandro no nilaza ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka fa efa voafehy ity aretina pesta ity kanefa izao nahafaty olona tany Toamasina izao indray.
Vao maika miorohoro ny olona any an-toerana. Miahiahy koa ny eto Antananarivo amin’ny fivezivezen’ny mponina sy ny loto eto Antananarivo.
Tsy nanome fanazavana ofisialy
Niezaka niantso ny tompon’ andraikitra isan’ ambaratongany teo anivon’ny sampan-draharaham-paritra sy disitrika misahana ny fahasalamam-bahoaka ny mpanao gazety, tao Toamasina hatramin’ny asabotsy sy alahady raha vao nandre ity vaovao ity.
Tsy nandray antso avokoa izy ireo. Milaza fa tsy eto an-toerana kosa ny sasany ka tsy maharaka ny zava-misy.
Nitohy hatry ny omaly, tonga tao amin’ny biraon’ny “médecin inspecteur” Toamasina I, ny dokotera Zara Hassanaly Patrick, ny tenanay fa saingy nalefan’ ity farany ho any amin’ny dokotera Haja izay misahana ny fitsaboana aretin-tratra sy ny havokavoka.
Satria tsy tao amin’ny biraony koa ny talem-paritry ny fahasalamana ao Atsinanana,
ny dokotera, Rakotoarimanana Raymond, dia nantsoina tamin’ny finday saingy tsy nahazoana valinteny. Voatery nanatona tany amin’ny biraon’ ny dokotera Andriamihaja etsy amin’ny PPH ny mpanao gazety mba hikarohana ny vaovao ofisialy saingy nilaza ity farany fa “tsy anjarany izany fa ny mitsabo ihany no andraikiny ka ny any amin’ny sampan-draharaha sahanin’ny tale no afaka miresaka amin’ny mpanao gazety”.